YouTubers, vagadziri vane ruzha, podcasters, vlogger uye zvimwe zvinogadzira zvigadzirwa, incl. vagadziri vemafirimu vanoda kutora yechokwadi inonyudza yakadzama audio yemapurojekiti avo, ikozvino vanogona kuzviita nekureruka nekutenda nekutanga kweNewNNXX CORE Binaural Headset Microphone kubva kuDanish mugadziri, DPA Microphones.
Iyo binaural nyowani yemusoro inopa yepamusoro mukurumbira mhando izvo zvigadzirwa zveDPA zvine mukurumbira pasi rese. Hunhu hwehunhu hwemakrofoni anovabvumidza kutora, munguva chaiyo, izvo chaizvo zvinonzwikwa nenzeve imwe neimwe kuitira kuti avo vanodya zvirimo pamahedhifoni vazive kurira kwakazara kwekuerera. Unhu uhwu hunoratidzawo kune zvimwe zvinoshandiswa senge zvinyorwa zvetsumo, kuongororwa kwemamiriro ekunze, kuongororwa kwemhando yepamusoro, kurira kwemitambo yemitambo, kurira kweindasitiri yemitambo, nezvimwe zvakawanda. Kunyangwe vaimbi mune eg jazz kana mumhanzi wekare, vaona zviripo mune ino mic: kutoridza ruzha kubva kune vanoimba 'kana kunyatsoita conductor pachinzvimbo chevateereri nzira itsva yekugovana ruzha rwevaimbi naiye pamwe nevateveri vake. uye inopa yekupedzisira yakatenderedza chiitiko.
Pamwoyo yeDPA's new 4560 CORE Binaural Headset iri maikorofoni ye4060 CORE miniature yakaiswa pamakona maviri ekuzevesa nekungogara nechekunze kwezeve remumwezi nzeve (sepahurefu) kuitira kuti ibate 1: 1 ruzha rwuri kuve yakanzwikwa nemunhu arikurekodha. Nzeve dzezeve dzakabatanidzwa neyemusoro inoshanduka-shanduka iyo iri nyore kukwana, yakagadzikana kupfeka uye inogona nyore kugadziriswa kuti ienderane nezviyero zvemusoro wega wega. Machira e Foam anopihwa maikorofoni kuti achengetedze nzvimbo yavo uye nekupa kurasa ruzha rwemhepo.
Iwo ma4060s anga ari sarudzo yevazhinji vanyanzvi vekurekodha zvinyoronyoro pamatanho makuru ekufambisa mifananidzo incl. mafirimu akadai saSpider-Man: Homecoming uye Mission: Zvinogoneka - Fallout. Izvo zvakare chave chinozivikanwa chinozivikanwa kuti iwe unogona kutora yako wega 4060 lavaliers uye "zvinhu" ivo munzeve dzako kuti ugone kunyatso binaural rekodhi, asi kusvikira zvino, hapasati paine mhinduro yakazara neine maikorofoni nokungwarira. paired kuti ive yepedyo mukunzwa sezvinobvira. Uyezve, dzinogona kupfekeka zviri nyore uye dzakabatirwa pakarekodha magiya seDPA's MMA-A Dhijitari Audio Interface inogona kubatana nechero iOS-michina. A 4560 CORE Binaural Headset ine MMA-Iyo Dhijitaru Odhiyo Audio Interface yakabatana ne iPhone uye mushandisi ane mobile binaural kurekodha mhinduro iri nyore kushandisa.
"Zvakarekodhwa zvakagadzirwa neDPA's 4560 CORE Binaural Headset dzakarurama kwazvo zvekuti vateereri vanowanzo vhura musoro vachitsvaga kwavanobva kurira," anodaro DPA Product Manager Rene Moerch. "Zvakanaka, zvirimo zvakanyorwa nechigadzirwa ichi zvinofanirwa kuteererwa nemahedhifoni sezvo munhu asingawane chiitiko chakafanana kana rwiyo ruchiridzwa pamusoro pevatauriri ve-stereo, asi paine nzira dzinogona kupa kurongeka uye upmix yemafomati stereo nema multichannel, ayo inoita kuti chigadzirwa ichi chive chakabatsira vanyori venhau vanoda kuunganidza zvinonzwika mumhepo. ”
Moerch anowedzera kuti chimwe chinhu chinobatsira cheDPA Binaural Headset Microphone kugona kwavo kunyengedza nekuti maikorofoni idiki kwazvo zvekuti mumwe munhu akapfeka headset anogona kutaridzika sokunge ivo chete vanopfeka mahedhifoni.
"Izvi zvinogona kubatsira kwazvo vanhu vari kurekodha munzvimbo dzine hukasha apo zvisina kuchengeteka kana zvakakodzera kuratidza maikorofoni," Moerch anodaro. "Asi kunyangwe yemapodcasts akajairwa, kunyorwa kwebinaural kunopa zvirimo zvakadzika zvakanyanya, zvipenyu uye zvinomanikidza kana zvichienzaniswa nemaitiro echinyakare ekunyora."
DPA itsva 4560 CORE Binaural Headset Microphone ine mutengo we860 EUR. Kuti uwane rumwe ruzivo ndapota shanya www.dpamicrophones.com/4560.
DPA Microphone ndiyo inotungamira Danish Professional Professional muumbi wepamusoro-soro remakrofoni ekugadzirisa maitiro ezvidzidzo. Chinangwa chikuru cheDPA ndechekupa nguva dzose vatengi vayo nechepamusoro zvakanakisisa maikorofoni zvingagadziriswa pamisika yayo yose, iyo inosanganisira kurarama kwakanaka, kuiswa, kurekodi, nhepfenyuro uye kuparidzirwa. Kana zvasvika pakusarudzika, DPA haina kutora zvishoma. Uyewo kambani haina kukanganisa pane zvayo yekugadzira, iyo inoitwa paDPA factory kuDenmark. Somugumisiro, zvigadzirwa zveDPA zviri kurumbidzwa munyika yose nekuda kwekunzwisisa kwavo kwakasiyana uye pachena, zvisingaenzaniswi zvakasiyana, zvakatendeseka zvikuru uye, pamusoro pezvose, zvakachena, zvisingabvumirwi uye zvisingaverengeki inzwi.
Kuti uwane mamwe mashoko, tapota shanya www.dpamicrophones.com
Nzvimbo dzekupedzisira ne whitenoise (ona zvose)
NativeWave Inosarudza Eva Wimmers SeMutungamiriri wayo Mutsva - April 2, 2020
Kuvanda Mujekerere Maonero Ekuti Ungabudirira Sei neDPA Lavalier Microphones - March 19, 2020
AMS Neve Inobatsira Parasite Kununura Kunoshamisa Kwemumoyo - February 26, 2020
4560 binaural headset maikorofoni Broadcast Engineer Broadcast Engineering DPA Microphone Graham Chapman Prmoted toEditor Kunyudza Audio isovideo, viarte, HDR, kuderedzwa kwevhu, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, kucheka kwe bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw Video Engineer	2019-12-02
Previous: A / V Injiniya
Zvadaro: DPA's Nyowani 4560 CORE Binaural Headset Microphone Inoita Nyore Yekuita Yekunamata Inzwi Capture